Tahala Rarihasina: handray ny hetsika ho an’ny Mozea | NewsMada
Tahala Rarihasina: handray ny hetsika ho an’ny Mozea
18 mey, andro iraisam-pirenena ho an’ny mozea. Noho ny fandaminana anefa, hotontosaina ny zoma 17 mey izao ny fankalazana izany eto Madagasikara, izay hatao eo anoloan’ny Tahala Rarihasina Analakely, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany ka hatramin’ny 4 ora sy sasany tolakandro.
Isan-taona, misy ny lohahevitra hanaovana fanentanana ny daholobe amin’ny anjara toeran’ny mozea eo amin’ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana. “Ny mozea, sehatry ny kolontsaina, antoky ny hoavin’ny nentim-paharazana” no lohahevitra hobanjinina amin’ity taona ity.
Asongadina mandritra ny andro iraisam-pirenena hoan’ny mozea ny anjara asa vaovao tazoniny. Mivoatra mantsy ny anjara asan’ny mozea anatin’ny fiarahamonina. Raha toa ka rafitra tsy niova izy taloha, miezaka kosa izao ho mpiara-miasa, mitodika amin’ny vahoaka sy ny mpiara-monina, malalaka, mahay mifanaraka ary mihetsika. Na izany aza, tsy miala amin’ny fototra niaingany, dia ny fanangonana, fitahirizana, fikarohana sy fampirantiana ny mozea.